Muxuu yahay Qaanuunka Qeysar ee Mareykanku kusoo rogay dalka Suuriya?
Faah Faahin: Dagaal 13 Askari lagu dilay oo ka dhacay duleedka Bacaadweyn.
127 qof oo ku dhintay dagaallo dib uga qarxay dalka Koonfurta Suudaan.
deg deg: ciidamada Al Shabaab oo dagaal kula wareegay deegaan katirsan gobolka Mudug.
Beesha Awbakar Gaabane Oo Nabadoon guud ku dooratay Aadan Yabaal. [Dhageyso].
Al Shabaab oo sarkaal katirsan maamulka Hirshabelle ku dishay magaalada Beled Weyne.
DF oo ka hadashay khasaaraha ka dhashay Weerarkii ka dhacay Xabsiga dhexe.
Wednesday June 17, 2020 - 19:39:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Suuriya waxaa maanta ka dhaqan gelay cunaqabateymo dhanka dhaqaalaha ah oo dowladda Mareykanka ay kusoo rogtay nidaamka uu madaxda ka yahay Bishaar al-asad.
Waxa loogu yeero qaanuunka Qeysar oo ay meel mariyeen xisbiyada dimuquraadiga iyo Jamhuuriga Mareykanka ayuu dhaqan galkiisu bilaawday maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 17 June 2020.
Qaanuun gaaleedkan oo Trump uu soo allifay ayaa durbadiiba hoos udhac dhaqaale ka abuuray gudaha wadanka Suuriya inkastoo Mareykanka iyo xulufadiisu ay sheegayaan in cunaqabateyntan ay ku beegsanayaan Bishaar Al-asad iyo shirkadaha iiraan iyo Ruushka hadane wuxuu aad usaameeyay nolosha malaayiin qof shacab Suuriyaan ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in xayiraado ay kusoo rogeen madaxda ugu sarraysa dalka Suuriya oo ay ugu horreeyaan Bishaar Al Asad iyo xaaskiisa Asmaa.
Kalimadda Qeysar ayaa ah magaca sarkaal sawir qaade ahaa oo katirsan ciidamada Booliska Suuriya balse sanaddii 2013 goostay kadibna caalamka usoo bandhigay sawirro naxdin leh oo ku saabsan qaabka ciidamada Al Asad utacdiibiyaan mucaaradka.
Hoos udhac ballaaran ayaa ku yimid lacagta Maxalliga Liiraha loo yaqaan ee laga isticmaalo dalka Suuriya, sare ukaca sarifka doollarka iyo hoos udhaca ku yimid lacagtaas maxalliga ah ayaa dhibaata weyn ku ah dhaqaalaha shacabka waxaana wadanka Suuriya ka taagan jiha wareer dhanka dhaqaalaha ah.
Qaanuunka Qeysar ee America ay sheegtay in ay ku ciqaabayso nidaamka Al Asad ayaa laga digayaa in uu macluul ka rido Suuriya waxaana durbadiiba wadamada Lubanaan iyo Suuriya ka dilaacay dhibaato dhaqaale.
War kasoo baxay waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa looga digay in macluul daran ay ka dilaacdo Lubnaan iyo Suuriya sababa laxiriira dhaqan galka qaanuunka Qeysar ee Mareykanku soo rogay.
Ganacsato waaweyn iyo shirkado qandaraaslayaal ah oo tacaamul maaliyadeed lalahaa nidaamka Bishaar Al-asad ayuu qaanuunkan saameeyay, sidoo kale ganacsato dalka wax ka dhoofin jiray iyo kuwa wax soo dhoofin jiray ayaa khasaaray kadib markii ay qiima beeshay lacagta Liiraha loo yaqaan.
Xisbiyada siyaasadda Mareykanka ayaa isku waafaqsan in qaanuunka lagu tadbiiqiyo Suuriya iyagoo iska dhaadhiciyay in lagu wiiqi karo dhaqaalaha Iiraan iyo Bishaar Al-Asad waxaase xusid mudan in dhinacyadan cadowga ku ah muslimiinta sunniga ay dhammaantood ku midaysanyihiin qamcinta jamaacaadka islaamiga ah.
Arrintan ayaa dadka soo xusuusinaysa macluushii sagaashameeyadii ka dilaacday dalka Ciraaq kadib markii Mareykanku uu cunaqabateymo dhaqaale kusoo rogay wadankaas isagoo ku marmarsiyoonaya in uu beegsanayo nidaamkii kaligii taliska ahaa ee uu madaxda ka ahaa Sadaam Xuseen.
Cunaqabateynta Ciraaq ayaa sababtay in ay macluul iyo nafaqa darro udhinteen in kabadan 2 malyan oo carruur reer Ciraaq ah jariimadaasna waxaa boor isku qaris looga dhiganayay ciqaabidda nidaamkii Saddaam.
Mala Socotaa In Taliyaha Ciidamada Mareykanka AFRICOM Stephen Townsend uu Yahay Garac! (WARBIXIN)
Roobab Daadad wata oo Kumanaan qof ku go'doomiyay dalka Suudaan.
Jihaadiyiinta ugu awoodda badan Saaxilka Afrika oo sheegtay Mas'uuliyadda weerar ka dhacay dalka Maali.